Dhismaha Eminönü Alibeyköy Tramway wuu dhamaaday inkasta oo uu burburay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulDhismaha Eminönü Alibeyköy Tramway wuu dhamaaday in kastoo uu burburay
25 / 03 / 2020 34 Istanbul, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, taraamka
dhismaha eminonu alibeykoy tram dhismaha waa la dhammeystirayaa in kastoo
1 kiiloomitir qaybta Eminönü - Alibeyköy Tram, oo ay dhiseyso shirkadda 'İBB', ayaa dumay oo dhibicdu ku dhacday shaqooyinki hore awgood. Qeybtan xariiqda, oo aan ku habooneyn nidaamka rakibaadda, ayaa la jebiyey oo shaqadii ayaa la bilaabay in mar labaad la qabto. Iyadoo ay taasi jirto, waxaa loogu talagalay in lagu dhammaystiro nidaamka tareenka dhammaadka sannadka sidii loo qorsheeyay.
Hawlaha dhismaha waxaa lagu dardar galiyay xalinta dhibaatooyinka maalgelinta Eminönü - Alibeyköy Tram Line, oo shaqadiisi dhisme ay ka biloowday Sanadkii 2016 ee ay soo saartay Waaxda Nidaamka Tareenka Magaalada Istambul (IMM). Si kastaba ha noqotee, dhibaato farsamo oo muhiim ah ayaa lagala kulmay dhismaha khadka.
Waxaa la go'aamiyay in 2018 km ee nidaamka tareenka ee la dhammaystiray Oktoobar 1 uu leeyahay fadhi fadhigiisu taagan yahay, shil iyo dhibaato soo jiidasho leh oo aan ku fadhiisanayn nidaamka tuubooyinka heer ay caqabad ku noqon karto hawlgalka taraamyada dhulka ka hooseeya aasaaska hadda iyo heerka tareenka.
Waxaa la sameeyay dadaallo si dhaqso loogu xalliyo dhibaatada, si loogu habeeyo hanaan ilaalinaysa soo-saarka. Isla waqtigaas, cabbiraadaha iyo baaritaannada waxaa gudaha ku fuliyay injineerada IMM iyo aqoonyahanno takhasus u leh Jaamacadda Sakarya.
Natiijada baaritaanka ka dib, inta lagu gudajiray marxaladda naqshadda superstructure-ka, xaaladaha adag ee dhulka gaar u ah Haliç lama tixgelin; Intii lagu guda jiray marxaladda mashruuca, waxaa la go'aamiyay in sahaminta dhulka iyo kormeerka garoonka aan lagu sameyn heer ku filan. Waxaa la arkay in socodkan aan caadiga ahayn iyo kan dhulka ka socda ee socdey ku dhawaad ​​1,5 sano uu xaddiday dhibaatada si loogu xaliyo tillaabooyin dheeri ah iyo in taraamka uu leeyahay qatar weyn xagga nabadgelyada hawlgalka.
FINAL TARGET EE DHAMMAAN SANADKA SIDUU WAA LA ILAALIYAA
Natiijadii qiimeyn farsamo oo faahfaahsan oo dhameystiran, mooshinka dhulka ayaa la saadaalinayaa inuu ku sii kordhayo waqti. Sababtaas awgeed, waxaa la helay in xalka ugu habboon uu noqon karo dib u dhiska 1 km ee aasaasiga ah ee khadka aan ku fadhiisanayn nidaamka tuubada oo jaba. Dareenka xasaasiga ah ayaa la muujiyey inuu yahay habka xalka ee la qorsheeyay in loo dhaqan geliyo qaab aan shaaca looga qaadi doonin dhibaatooyinka la soo maray.
Macnaha guud, ka saarista taraamka tareenka iyo shaqooyinka burburin la taaban karo ayaa ka bilaabmay Balat-Ayvansaray, oo lagu dhammeeyay garoonka dhexdiisa 2018. Markaa, tuubbooyinka tareenka dhulka hoostiisa mara ayaa la bilaabi doonaa.
In kasta oo shaqadan dheeriga ah ee ay tahay in lagu qabto ka baxsan barnaamijka shaqada, IMM waxay adeegsan doontaa kooxo dheeraad ah iyo agabyo qalab si ay khadka ugu diyaariyaan dadka deggan Istanbul dhamaadka sanadkan, sidii loo qorsheeyay.
khariidadda eminonu alibeykoy